10ka Buug ee Safarka ee loogu talagalay Jacaylka Jacaylka | Wararka Safarka
Lola curiel | | General, Waqtiyada firaaqada, safarka
Socdaalku waa mid ka mid ah howlaha adduunka ugu xiisaha badan uguna taajirsan. Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood, waxaan ku qasban nahay inaan dib u dhigno rabitaankeenna sahaminta sababtoo ah baahida loo qabo inaan joogno meel go'an ama nasasho la'aan awgeed. Ka aqri meelaha fogfog meeraha oo baro wax ku saabsan khibrada safarrada kale, waa hab wanaagsan oo lagu dilo cayayaanka isla markaana lagu bilaabo qorshaynta jidadkaaga soo socda. Waxaan kuugu dhaafayaa qoraalkan liistada kuwa aniga ii ah 10-ka buugaag ee safarka ugu wanaagsan ee loogu talagalay dadka jecel xiisaha Ha moogaan!
1 Habka ugu gaaban
2 Gudaha patagonia
3 Suite Talyaani ah: Safar lagu tagayo Venice, Trieste iyo Sicily
4 Qorrax ka soo baxa Koonfur-bari Aasiya
5 Riyada Jupiter
6 Tilmaamaha loogu talagalay safrayaasha aan waxba galabsan
7 Hooska Wadada Xariirta
8 Shan Safar oo Naar ah: Riwaayado aniga ila socda iyo Kuwa Kale
9 Ku wajahan dariiqyada duurka
10 Saddex waraaqood oo ka socda Los Andes
Habka ugu gaaban
12 sano kadib, saxafiga Manuel Leguineche ayaa wax ka sheegaya "Habka ugu gaaban" riwaayadaha uu ku noolaa qayb ka mid ah Safarka Diiwangelinta Dunida ee Trans World, safar ka soo bilaabmay jasiiradda oo ay ku qaadatay halyeeyaasheeda inay u safraan in ka badan 35000 km 4 x 4. Sidoo kale waa sheekada wiil ka baahi badan khibrad, naftiisa u jiifsaday si uu u rumeeyo riyadiisa: "Inaad ku dhex wareegto dunida".
Safarkii, oo qaatay in ka badan laba sano, ayaa soo maray Afrika, Aasiya, Ustaraaliya iyo Ameerika, xilli 29 dal oo ka mid ah waddada uu dagaalku ka socday. Shaki la'aan, sheeko xiiso leh iyo waa in loo akhriyaa dadka jecel halyeeyada si wanaagsan loo sheegay.
Hada ka daawo Amazon
Suugaanta caadiga ah ee safarka, sheeko aad u shaqsiyadeed oo ka soo bilaabata yaraantiisii ​​qoraaga, Bruce Chatwin.
Haddii aad raadineyso qalafsanaan, kani ma noqon karo buugga aad raadineyso, maxaa yeelay mararka qaarkood xaqiiqadu waxay ku dhex jirtaa xusuus iyo sheekooyin khiyaali ah. Laakiin haddii aad isku daydo, waad ku raaxeysan doontaa safarka Chatwin iyo waxaad ogaan doontaa nuxurka Patagonia, mid ka mid ah meelaha ugu sixirka iyo khaaska badan meeraha.
Suite Talyaani ah: Safar lagu tagayo Venice, Trieste iyo Sicily
Soosaarka suugaaneed ee Javier Reverte, oo diirada lagu saaray safarka, ayaa ah si weyn ayaa lagula taliyay inaad ku riyootid meelaha ugu wanaagsan adigoon guriga ka bixin.
Suite Talyaani ah: Safar lagu tagayo Venice, Trieste iyo Sicily waa ku dhowaad qormo suugaaneed oo Reverte wuxuu na geeya muuqaalka ugu quruxda badan ee soo jiidashada leh ee Talyaaniga. Intaa waxaa dheer, taariikhda safarka waxay ku qasan tahay sheekooyin iyo xog taariikhi ah oo gacan ka geysaneysa in si wanaagsan loo fahmo aagga.
Qorrax ka soo baxa Koonfur-bari Aasiya
Yaan waligiis ku fikirin inuu jabiyo hal-abuurnimada? Qoraaga wargayska Breaking Dawn ee Koonfur Bari Aasiya, Carmen Grau, ayaa go’aansatay inay talaabo hore u qaado oo ay ka tagto shaqadeeda si ay ugu noolaato khibrad ay waligeed ku taami jirtay. Waxay ka tagtay nolosheedii Barcelona waxayna ku qalabaysay boorso, waxay gashay safar aad u weyn.
Toddoba bilood ayuu socdaal ku maqnaa Thailand, Laos, Vietnam, Cambodia, Burma, Hong Kong, Malaysia, Sumatra, iyo Singapore. Buuggiisa, wuxuu ku wadaagayaa dhammaan faahfaahinta hal-abuurkiisa, safaradii doomaha, basaska, tareennada iyo habeennadii hoyga.
Riyooyinkii Jupiter ayuu weriye Ted Simon ka sheekeeyay xiisihiisii ​​adduunka ugu safray mooto Triumph. Simon wuxuu safarkiisa ka bilaabay 1974, wuxuuna ka yimid Boqortooyada Midowday (United Kingdom), mudadii afarta sano ahaydna wuxuu soo maray wadar dhan 45 dal. Buugani waa sheekadii uu ku soo maray shanta qaaradood. Haddii aad ka mid tahay kuwa jecel laamiga, ma seegi kartid!
Tilmaamaha loogu talagalay safrayaasha aan waxba galabsan
Ha filanin hagaha safarka ee caadiga ah markaad akhrinaysid buuggan. Mark Twain, oo laga yaabo inuu kuugu muuqdo inaad aqoon u leedahay sida abuure Tom Sayer, wuxuu ka shaqeeyey 1867 wargeyska Alta California. Isla sanadkaas, wuxuu ka tagay New York safarkii ugu horeeyey ee dalxiis abaabulan taariikhda casriga ah iyo Twain wuxuu u yimid inuu qoro taariikho taxane ah oo uu codsaday wargeyska.
Hagayaasha safrayaasha aan waxba galabsan ayaa ururiya safarkaas weyn ee uu uga qaadi lahaa Mareykanka ilaa dhulka barakeysan iyo, tilmaamtiisa, wuxuu ka warramayaa marinkiisa xeebta Mediterranean iyo waddamada sida Masar, Griiga ama Kriim. Qodob kale oo togan oo buuggu ka mid yahay ayaa ah qaabka shakhsiga ah ee Twain, wuxuu leeyahay kaftan dabeecad leh taas oo ka dhigaysa akhriska mid lagu farxo oo aad u xiiso badan.
Hooska Wadada Xariirta
Colin Thubron waa qoraa lama huraan u ah suugaanta safarka, mid ka mid ah safarkaas aan daalka lahayn ee safray in ka badan kala badh adduunka oo yaqaan sida loo sheego si aad u wanaagsan. Shaqooyinkiisa si ballaadhan ayaa loo abaalmariyey waxaana lagu turjumay in ka badan 20 luqadood. Buugaagtii ugu horraysay ee lagu daabaco noocyada waxay diiradda saareen gobolka Bariga Dhexe, markii dambena, socdaalkiisii ​​wuxuu u wareegay USSR-dii hore. J) Haa, dhammaan buug-yaraha safarkiisa wuxuu u dhexeeyaa Aasiya iyo Eurasia oo habayn sax ah Raajo ku saabsan aaggan ballaadhan ee meeraha halkaas oo isku dhacyada, isbeddelada siyaasadeed iyo taariikhdu ay ku dhex milmaan hiddaha iyo muuqaalka.
Sanadkii 2006, Thubron wuxuu daabacaa Hooska Wadada Xariirta, waa buug uu kula wadaagayo safarkiisa cajiibka ah wadada dheer ee adduunka. Waxay ka tagtay Shiinaha waxayna soo martay inta badan Aasiya si ay u gaarto buuraha Bartamaha Aasiya, in ka badan kow iyo toban kun oo kiilomitir muddo 8 bilood ah. Waxa ugu wanaagsan ee buuggan ku saabsan waa qiimaha uu waayo-aragnimada qoraagu siinayo. Wuxuu hore u soo maray qaybo badan oo ka mid ah dalalkaas, sannado ka dibna wuu soo noqday, kaliya ma aha inuu ka soo kabto taariikhda jid muhiim u ahaa horumarka ganacsiga reer galbeedka, wuxuu bixiyaa isbarbardhigyo iyo aragti ah sida isbeddelka iyo kacdoonku u beddeleen aagga.
Shan Safar oo Naar ah: Riwaayado aniga ila socda iyo Kuwa Kale
Martha Gellhorn waxay horseed u ahayd wariye dagaal, Suxufiga Mareykanka ah wuxuu soo tebiyay khilaafaadyadii qarnigii XNUMXaad ee Yurub, wuxuu soo tebiyay Dagaalkii Labaad ee Adduunka, wuxuu ahaa midkii ugu horreeyay ee ka warbixiya xerada Dachau (Munich) oo xitaa goob joog u ahayd soo degitaanka Normandy.
Gellhorn wuxuu soo maray xaaladihi ugu halista badnaa meeraha khatartuna waxay ahayd mid joogto ah oo ku saabsan xiisahiisa, gudaha Shan Safar oo Naar ah: Riwaayado aniga ila socda iyo Kuwa Kale, wuxuu ka hadlayaa dhibaatooyinkaas, waa a soo uruurinta ugu fiican safaradiisii ​​ugu xumaa taas oo uu kaga warramayo sida uu ula kulmay cabsi iyo dhibaato isagoo aan lumin rajada. Buuggan waxaa ka mid ah safarkiisii ​​uu ku soo maray Shiinaha Ernest Hemingway intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Sino-Japan, safarkiisii ​​uu ku dhex maray Kariibiyaanka isagoo raadinaya gujisyada Jarmalka, marinkiisii ​​Afrika iyo marinkiisii ​​Ruushka ee USSR.
Ku wajahan dariiqyada duurka
En Ku wajahan dariiqyada duurka Qoraa Mareykan ah Jon Krakauer ayaa sheegaya sheekada Christopher Johnson McCandless, nin dhalinyaro ah oo reer Virginia ah kaas oo 1992dii, ka dib markii uu ka qalin jabiyay Taariikhda iyo Antropology ee Jaamacadda Emory (Atlanta), go'aansaday inuu bixiyo lacagtiisa oo dhan oo uu safar aado ilaa moolka Alaska. Wuu tegey isagoon macasalaamaynin oo ay adag tahay in qalab la helo. Afar bilood kadib, ugaarsatadu waxay heleen maydkiisa. Buuggu ma aha oo keliya inuu ka sheekeeyo safarkii McCandless, naftiisa iyo sababaha taasi waxay u horseeday nin dhalinyaro ah oo ka soo jeeda qoys maalqabeen ah inuu siiyo isbedel nololeed oo caynkaas ah.
Saddex waraaqood oo ka socda Los Andes
Aagga buuraha leh ee Peruvian Andes waa mid ka mid ah meelaha loogu jecel yahay dadka jecel dabeecadda iyo dalxiiska dalxiiska. Seddex warqad oo ka socota Andes, socotada Patrick Leigh Fermor ayaa kula wadaageysa marinkiisa gobolkaan. Wuxuu safarkiisa ka bilaabay magaalada Cuzco, 1971, halkaasna wuxuu uga sii gudbay Urubamba. Shan saaxiibo ah ayaa la socday, iyo malaha shakhsiyadda kooxdu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu soo jiidashada badan sheekadan. Safarku wuxuu ahaa mid aad u kala duwan, wuxuu ka koobnaa gabayaa ay weheliso xaaskiisa, aqoonyahan Swiss ah oo barafka iyo dahablaha ah, aqoonyahan ku takhasusay cilmiga bulshada, Notisthamshire aristocrat, duke iyo Fermor. Buugga, wuxuu ka sheekeynayaa dhammaan waaya-aragnimadii kooxda, sida ay isaga kaabayaan midba midka kale in kasta oo ay aad u kala duwan yihiin iyo sida aragtidooda adduunka iyo dhadhanka safarku u midoobayaan.
Laakiin sheekada dhaafsiisan, shaki la’aan aad uqurux badan, Saddex Waraaqood oo ka yimid Andes Gut safar cajiib ah oo ka socda magaalada, Cuzco, ilaa meelaha ugu fog dalka. Shanta safar ayaa ka amba baxay Puno ilaa Juni, oo u dhow harada Titicaca, waxayna ka yimaadeen Arequipa iyagoo ku sii jeeda Lima. Bogagga buuggan ayaa kuu qaadaya mid kasta oo ka mid ah meelahaas Ma jiro sheeko kafiican oo laguxiro liiskan 10ka buug ee safarka ugufiican ee loogu talagalay dadka jecel xiisaha!
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » General » Waqtiyada firaaqada » Buugaagta safarka sare ee 10 ee loogu talagalay dadka jecel xiisaha
Dharka caadiga ah ee Veracruz